पोखरा थिएटरमा ‘सिरुमारानी’ मञ्चन – RadioMBC
Home > कला > पोखरा थिएटरमा ‘सिरुमारानी’ मञ्चन
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १०:४४
बुधबारदेखि पोखरा नाटकघरमा नियमित ‘सिरुमारानी’ मञ्चन् भैरहेको छ । पाेखरा थिएटरद्धारा सन्चालित गन्धर्व नाटक घरमा मन्चन भइरहेकाे सरुभक्तकाे नाटक ‘सिरुमारानी’ले दर्शकहरुकाे सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकाे छ ।
लामाे समयपछि नाटक मञ्चन शुरु भएकाे पाेखरामा दर्शकहरुकाे उल्लेख्य उपस्थिति र सकारात्मक प्रतिकृयाले रंगमञ्चका प्रति पाेखरेली लगाव नघटेकाे पाइयाे ।
पोखरामा मञ्चन हुने नाटकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको देखेर मौन बसेको नाटकका कलाकार माओत्स गुरुङले भने, ‘हामीले २०५६ सालमा जुन ठाउँमा लगेर नाटक छाडेका थियौं त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेनौं । यसमा म आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्छु । यही कारण नै हो नाटकमा ग्याप रहेको,’ माओत्सेले प्रष्ट्याए । यसपल्ट भनेजस्तो टिम र नाटक भएकाले माओत्सेले नाटकमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव स्वीकारे । तर, नाटकमा लामो ग्याप रहेकाले होला उनलाई अहिले संवाद सम्झन गाह्रो भइरहेको छ । सँगसँगै यो नाटक गरिरहँदा उनलाई आफू नाटकमा ‘जिरो’ रहेको पनि अनभूति भइरहेको छ।
‘पहिला पहिला त रोबोटले जस्तो काम गरिरहेको रहेछु निर्देशकले जे भन्यो त्यही मात्र मान्ने,’ माओत्सेले प्रष्ट्याए, ‘यस पटक भने नाटकको दश्य दिमागमा आइरहेको छ । पहिला त नाटक नै बुझेको रहेनछु।’
दर्शकले नाटकमा अभिनय गर्ने कलाकारहरुकाे खुलेर प्रशंसा गर्नुका साथै थियटर सञ्चालकलाइसमेत धन्यवाद दिएका थिए। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठको लेखनको नाटक ‘सिरुमारानी’ मा पोखराका नयाँ तथा पुराना रंगकर्मीको अभिनय रहेको छ।
नाटकमा पोखरेली रंगमञ्चमा चिनिइसकेका प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, विष्णु गौतम, धनबहादुर गायकसंगै रंगमञ्चमा देखिइसकेका दिल गुरुङ र रमेशबाबु तिमिल्सिना तथा आशा लाग्दा अन्य प्रतिभा अन्जू दाहाल, लक्ष्मण डुम्रे, बबिता मल्ल, प्रसूना भण्डारी, सीमा गुरुङ, सचिन गिरी, शरद भण्डारी, ध्रुव पौडेल, अविराज बी. सी., सूर्य सुवेदी, सम्झना सिर्पाली, विश्वराज पौडेल लगायतका कलाकार अभिनय छ ।
थियटरका अध्यक्ष परिवर्तनको संयोजनमा मञ्चन हुने नाटकको निर्देशन सोमनाथ खनालले गरेका हुन्।
रुपन्देहीमा ‘माछा गाउँ’ ! वार्षिक १ अर्बको कारोबार
मोदीलाई काठमाडौंमा पनि साँचो बुझाइने !
इण्डोनेशियामा फेरी ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प ८२ जनाको मृत्यु,सयौं घाइते
हराइरहेको बिमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला
युवालाई स्वदेशमा फर्काउछौं-प्रचण्ड
“२१औँ शताब्दीको जनवाद”अबको बहस…
डडेल्धुरा बस दुर्घटना अपडेटः मृतकको संख्या १८ पुग्यो, २७ जना घाइते
‘विगतमा बाहिर-बाहिर समाज सेवा गरेँ अब आफ्नै जिल्लामा गर्छु’- आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका दीपक मनाङे
महोत्तरीबासीको कामना पोखरेल फेरि मन्त्री भएको हेर्ने चाहाना ! पोखरेलको घरदैलो आज पनि
मेयरमाथि आक्रमण गर्ने विप्लवका नेता पक्राउ !